Emma Louie, Munyori paKarman® Mawiricheya
Author Archives: Emma Louie
Nzira ina dzekugadzirira Njodzi Kune Vakaremara
5 Nzvimbo dzekushanyira muLos Angeles kune Vakaremara Vashanyi
Posted on July 18, 2018 November 20, 2020 by Emma Louie
Guta reAngel rinozivikanwa nemamiriro ekunze ane zuva uye vanozivikanwa muHollywood. Kushanyira Los Angeles? Pazasi pane runyorwa rwezvimbo dzekushanyira dzakaremara dzinowanikwa zvine hushamwari: 1. Universal Studios Hollywood Inowanikwa mukati memwoyo weHollywood, kutasva kwakawanda, mashoo, uye zvinokwezva kuUniversal Studios kune wiricheya inowanikwa. Paki inopa chiratidzo […]
Vatambi vane hurema paTerevhizheni
Posted on September 21, 2017 November 20, 2020 by Emma Louie
Mumakore mashoma apfuura, pakave nekukwira kwehurema kuri kuratidzwa munhau. Vatambi vane hurema vanga vachiita zvakanaka kuburikidza nekutamba akakosha madhizaina zvisinei nekuremara kwavo. Nguva zhinji, vatambi vasina kuremara vanga vachitamba mabasa akaremara, zvichikonzera kupokana kuri kuitika muindasitiri yenhau. Zvisinei, pane […]
Dzimba Dzakanaka Dzinobatsira Sei Vanhu Vakaremara
Posted on August 24, 2017 November 20, 2020 by Emma Louie
Ndezvipi smart zvishandiso zvekumba? Iwe unogona kunge wakamboona izwi richitenderera pane kushambadza kana kufarirwa kwetekinoroji yekuvandudza. Izvi zvigadzirwa zvine hunyanzvi maficha mavanokubatsira iwe pamabasa ezuva nezuva, akadai sekubatidza / kudzima mwenje uye nekukupa iwe yazvino nhau neruzivo nekungoshandisa izwi rako kana chinhambwe […]
Matipi Ekudya Kunze muWiricheya
MaAmerican anehurema Mutemo (ADA) mutemo wekodzero dzevanhu unochengetedza vanhu vakaremara kubva pasarura uye unoona mikana yakaenzana. Imwe resitorendi inofanirwa kunge iine zvinodiwa izvi: Access Route Aisles, walkways, kana nzira dzinofanira kunge dzinosvika makumi matatu nemasendimita paupamhi. Nzvimbo, senge denderedzwa remamita mashanu kana nzvimbo yakaita saT, inofanira kuva […]
Alarm Yega uye 3 Zvikonzero Nei Uchiida Izvo
Posted on August 3, 2017 November 20, 2020 by Emma Louie
Alarm diki yemunhu inogona kubatsira kudzivirira anorwisa kuti asakuvadze seKarman Max Alarm - iMAX SOS alarm. Iyo mhere ine ruzha mhere inogona kutyisidzira iye ari kurwisa uye zvakare kudhirowa varipedyo nevanomira kuti vakumbire rubatsiro. Vakaremara uye Vakwegura vari panjodzi yekuva zvinangwa zvevanorwisa. Sei? Panyama […]
Kicheni Matipi uye Zvishandiso zveRinowanikwa Kubika
Posted on August 1, 2017 November 20, 2020 by Emma Louie
Kubika kunogona kuita basa rinogutsa kana kuti rinogumbura; zvisinei, vanhu vanofarira kubika vanozozvinakidzwa. Kuva nekicheni yakasvikika inogona kunge iri nzira yakanakisa yekuenda asi inogona kudhura. Usarega izvo zvichikutadzisa kunakidzwa neshungu dzako. Pazasi pane matipi uye maturusi ekicheni […]
5 Ehutano Hupenyu Matipi eVashandisi veWiricheya
Posted on July 24, 2017 November 20, 2020 by Emma Louie
Kuita maekisesaizi Kurovedza muviri kwakakosha sezvakangoita kune chero mumwe munhu mukuru. Izvo zvakanaka kune pfungwa uye zvakafanira kuchengetedza hutano hwemwoyo wako nemapapu. Kune mhando dzakawanda dzekurovedza muviri dzaunogona kuita seyoga, maekisesaizi, uye cardio… uye hongu unogona kuzviita zvese mu […]
Wiricheya Koshitomu Pfungwa dzeComic Kokorodzano
Gore rega rega, vanhu vazhinji vari kuenda ku "fan-based" cons yakadai saDisney's D23 uye Comic Con muSan Diego. Ichi chiitiko chinowanzo gara kwemazuva matatu apo paine mukana wekuti iwe ungasangane neako aunofarira vatambi / vatambi uye uwane kutsva nhau nezve iwe waunofarira terevhizheni akateedzana kana mabhaisikopo. Ino zvakare inzvimbo […]
Paunenge uri kuvhima kwemafurati, unotsvaga nzvimbo kuti uone kuti zviri nyore. Iwe unoda kuve nechokwadi chekuti furati ine nzvimbo yakakwana uye nzvimbo yekugadzirisa zvaunoda. Kutsvaga imba ine iro pasuru rese yatove basa rakaoma kuita. Nekudaro, kana iwe uri wakaremara mufurati muvhimi, iyo […]